७० हजारलाई डेंगु - Birat Sandesh
७० हजारलाई डेंगु
पछिल्लो समय प्रकोपका रूपमा फैलिएको डेंगुबाट करिब ७० हजार व्यक्ति प्रभावित भएको चिकित्सकले बताएका छन् । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) को तथ्यांकअनुसार सरकारी अस्पतालमा जँचाउन आएका बिरामी मात्रै वैशाखयता करिब७ हजार छन् । निजी अस्पतालमा जँचाएका र अस्पताल आइनपुगेका बिरामी संख्या जोड्दा करिब ७० हजार पुग्ने चिकित्सकको आकलन छ ।
ईडीसीडीको तथ्यांकअनुसार वैशाखदेखि असारसम्म ३ हजार ४ सय २५ जना र साउनयता ३ हजार ५ सय ८० जना उपचार गराउन अस्पताल आइपुगेका छन् । ‘यो सरकारी क्षेत्रको रिपोर्टेड तथ्यांक हो, निजी क्षेत्रका धेरै केस रिपोर्टिङ भएका छैनन्,’ ईडीसीडीका किटजन्य रोग नियन्त्रण शाखा प्रमुख डा. प्रकाश शाहले भने, ‘हाम्रै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि डेंगुका बिरामी करिब ७० हजार हुनुपर्छ ।’ सरकारी तथ्यांकअनुसार हालसम्म ४८ जिल्लामा डेंगु देखिएको छ । यो रोगले ४ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ भने थप दुई जनाको मृत्यु डेंगुले भएको हो/होइन प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा छ ।
ईडीसीडीका किटजन्य रोग नियन्त्रण शाखा प्रमुख शाहका अनुसार आरडीटी किटको विभिन्न जिल्लाबाट अत्यधिक माग भइरहेको अवस्थामा हाल स्वास्थ्य सेवा विभागबाट आरडीटी किटको सट्टा बिरामीहरूको रगत परीक्षण गरी रोग निदान गर्न भनिएको छ । आरडीटी किटको प्रयोगले डेंगु पोजेटिभ वा नेगेटिभ देखिए पनि उपचारको प्रोटोकलमा कुनै फरक नपर्नेसमेत डा. शाह बताउँछन् । कान्तिपुर
प्रकाशित मिति : २२ भाद्र २०७६, आईतवार ०८:४२
‘छक्का पञ्जा ३’ को पहिलो गीत रिलिज (भिडियो)
उपनिर्वाचनका उम्मेदवार चयन गर्ने जिम्मा पदाधिकारीलाई
‘जनता नै नबाँचे तपाईंको रेल कसले चढ्ला प्रधानमन्त्रीज्यू ?’
मिस नेपाल २०१९ को उपाधी अनुस्का श्रेष्ठलाई
प्रदेश एक सरकारले संबिधान दिवस भव्य रुपमा मनाउने तयारी
बकर ईदका अवसरमा न्यू अन्नपूर्ण गोल्डकप हुने